Toriteny alahady 30 Jona 2013 | FJKM Amboniloha
Toriteny alahady 30 Jona 2013
Isaia 41 : 14 – 20
Kankana no iantsoan ‘Andriamanitra ny taranak’i Jakoba. Resy lahatra Andriamanitra mahita ny fiainan’ny Zanak’Israely izay Firenena kely tsy dia manao ahoana akory, na amin’ny lafiny ara batana na fisainan na ny toe –karena; nefa ao anatin’izany fahakelezany izany indrindra no itoeran’ny voninahitr’Andriamanitra.
Ny taranak’Israely dia oharina amin’ny kankana, kely, fetsy, mamono, miolakolaka sy miovaova izay midika hoe tsy mety mitoetra tsara no sady tsy mitoetra ho mahatoky ao amin’Andriamanitra fa mora lavo. Nefa raha vao miala amin’Andriamanitra dia naman’ny manary ny tenany.
Miantefa amintsika izany fanoharana nataon’Andriamanitra ho an’i Jakoba izany. Isika Fiangonana no kankana, mora miova, tsy mitoetra tsara fa mora avilin’ireny fampianarana maro samihafa ireny. Mihorohoro amin’ny fiainantsika Andriamanitra ka tena miditra an-tsehatra mihitsy.
And 15 : Tendrombohitra sy havoana, ny avonavona sy ny fiheveran-tena ho tsy mila an’Andriamanitra dia ahetrin’Andriamanitra satria efa Izy no mandray an-tanana feno ny fiainantsika. Miasa ao anatin’ny Mpanompony Andriamanitra ka amboariny sy tefeny ny olona mba ho tonga araka izay hitiavany azy. Tsy isika no miezaka ho tsara eo anatrehan’Andriamanitra fa Andriamanitra mihitsy no miasa, ny anjarako sy ny anjaranao dia ny mandray ny fanapahan-kevitra hanaiky ho amboariny.
Na dia eo aza ny fahalemena sy ny fahakelezantsika; rehefa manaiky izaho sy ianao dia mety koa Andriamanitra hanavao sy hanafaka antsika amin’ny faharatsiam-piainana rehetra. Ary amin’ny fahalementsika no anehoany ny voninahiny.
And17 : Misy ny fotoana izay mahamaina antsika ka itoerantsika ao anatin’ny fahafatesana ara –panahy mihitsy aza, tahaka ny zanak’Israely izay mandeha amin’ny tany efitra nefa dia asandratr’Andriamanitra mandrakariva ary omeny ilay loharano miboiboika ka na dia miaina amin’ireo endrim-pahafatesana maro aza aho, ny ran’i Jesoa Krisy no mamelona ka manangana indray. Na dia any an-tany efitra aza dia afaka hitondra fiainam-baovao ho an’ny olona tsy manana an’I Jeso noho ny fanavaozan’Andriamanitra.
And 19 : Ny Zanak’Israely koa dia noharina amin’ny hazo sarobidy fanao fanaka ao an-tranon’Andriamanitra cf Sal 92: 12-15. Norafetina hanana endrika tsara sy hitondra fofo-manitra ao an-tranon’Andriamanitra, ka tsy handiso fanantenana Azy intsony.
Antom-pisian’ny Fiangonana : Hitondra ny fofo–manitra sy famelombelomana ho an’ny hafa. Matoa aho mbola tehirizin’Andriamanitra ho isan’ny Fiangonana dia ataony ho vavolombelona, ka na dia kely sy miolikolika toy ny kankana aza dia tehirizin’Andriamanitra mandrakariva ho amin’ny fahatsarana.
Ho an’Andriamanitra ny voninahitra
ANDRIANARISOA Hajaniaina , Mpitandrina
Catégories :	Toriteny	/ par AnjGab 5 juillet 2013